NCS ရှက်ဖီး - Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်
NCS ရှက်ဖီး - Element ကို Society က
ယနေ့ Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းများက powered NCS ရှက်ဖီး Join!
တဦးတည်းအံ့သြဖွယ်နွေရာသီအတွက်သင်အိမ်ကနေနထေိုငျ၏ CV ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး, သင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်အံ့သြဖွယ်သောလူဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလဲ? ပြောင်းလဲမှုဟုတ်သည်မှာစတင်သည်!
Phase 1: အတူတကွ GET
သငျသညျကျောက်တောင်တက်, တောင်တက်နူးလှေလှော်ခြင်း, မြှားပစ်နဲ့တူလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုပြင်ပလှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနမှာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု-ထုပ်ပိုးစွန့်စားမှုအတွက်အသင်းဖော်တွေနဲ့ Bond ပါလိမ့်မယ်။
Phase 2: ပါဝငျ
သင်နှင့်သင့် NCS အသင်းဖော်သစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာအောင်ကူညီမယျ့သူဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လူဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်။
Phase 3: သင့်မာကုစေ
AND ကျင်းပ ...
သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအရေးယူစီမံကိန်းကိုပြီးစီးတော့သည့်အခါနောက်ဆုံးတွင်, တကမှာကျင်းပဖို့အချိန် ကျောင်းဆင်းပွဲပါတီ.
သငျသညျဝန်ကြီးချုပ်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လုပ်အားပေးစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်ဒေသခံဧရိယာနှင့် NCS ချိတ်ဆက်နေဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုရယူလိမ့်မယ်။
NCS သာကြား၌အားလပ်ချိန်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်4ရက်သတ္တပတ်, ဒါကြောင့်အချိန်အများကြီးဂီတပွဲတော်များနှင့်မိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်ရှိပါတယ်။ မြေတပြင်လုံး NCS အတွေ့အကြုံကိုလည်းရရှိနိုင်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီဖြင့်, အစားအစာ, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်နေရာထိုင်ခင်းများအပါအဝင်ရုံ£ 50 ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ NCS သင့်ရဲ့နွေရာသီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Make!
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် * Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကပေးပို့တဲ့ဒီပရိုဂရမ်ရှိနိုင်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များနှင့်အတူ, သင်£ 50 ထက်မပိုကုန်ကျမည် *
ဒြပ်စင် Society ကတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး NCS အစီအစဉ်များကိုကယ်တင်တတ်၏။ Programs ကိုသင်တို့နှင့်အတူအစိတျအပိုငျးကို ယူ. , နှစျတှငျအဘယျသို့ပွိုင့်မှာသငျသညျစိတျအပိုငျးကိုယူ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသော program တစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက်အတိအကျအဘယ်အရာကိုထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါသောသူပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 0114 2999 210, ဒါမှမဟုတ် e-mail, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NCS ရေးအဖွဲ့မှာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ ncs@elementsociety.co.uk
*** သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့£ 15 လျှော့စျေးရရန်သင့်ပံ့ပိုးပေးအဖြစ် Element ကို select လုပ်ပြီးသေချာပါစေ! ***